बोनस समायोजनपछि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य कति !
ARCHIVE, MARKET WATCH » बोनस समायोजनपछि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य कति !
काठमाडौं - एभरेष्ट इन्सुरेन्सको १०% बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन भएको छ । बोनस समायोजनपछि इन्सुरेन्सले सेयर प्रतिकित्ता १३ सय १४ रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार बजार खुल्दा एभरेष्टको सेयर कारोबार १३ सय १४ रुपैयाँलाई नै आधार मानेर खुल्नेछ । यसको औसत आधार मूल्य भने १३ सय ५२ रुपैयाँ ८२ पैसा छ ।
एभरेष्ट इन्सुरेन्सले वैशाख १० मा हुने साधारण सभाको लागि सोमबारदेखि नै बुक क्लोज गरेको छ । सभा अग्रवाल भवन, कमलपोखरी काठमाडौंमा दिउँसो २ बजे सुरु हुनेछ । कम्पनीले ६ लाख ३९ हजार ४७४ रुपयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव लैजानेछ । कम्पनीले संस्थापक हिस्सा ५१% बनाउन पहिला १०५% संस्थापक हकप्रद र यसपछि कायम हुने सम्पूर्ण सेयरधनीलाई फेरि ३००% हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गर्दैछ ।